जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् असार ९ गते बिहीबारकाे राशिफल
June 22, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली माइकाे दर्शन गरी हेर्नुस् असार ९ गते बिहीबारकाे राशिफल
मेष राशि : आम्दानीमा वृद्धि र प्रगति अनुकूल रहनेछ। लाभको अवसर आउनेछ । साझेदारहरूको सहयोग समयमै प्राप्त हुनेछ। यात्राको योजना बन्नेछ । घरबाहिर केही तनाव रहनेछ। स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला । स्थायी सम्पत्तिको कामले ठूलो लाभ दिन सक्छ। बेरोजगारी हटाउने प्रयास सफल हुनेछन्। वृष राशि : पार्टी र पिकनिक कार्यक्रम बनाइनेछ। स्वादिष्ट व्यञ्जनहरूको आनन्द लिनुहोस्। व्यापार […]
जन्म दिने बुवासँग कुनै पनि नाता नराख्ने भन्दै छाेरीले दिइन् अदालतमा निवेदन !
June 22, 2022 N88LeaveaComment on जन्म दिने बुवासँग कुनै पनि नाता नराख्ने भन्दै छाेरीले दिइन् अदालतमा निवेदन !
काठमाडाैं । “जन्म दिने बुवासँग कुनै पनि तरिका, आकार वा रूपमा जोडिरहन नचाहेको” भन्दै अमेरिकी अर्बपति इलोन मस्ककी छोरीले कानुनी रूपमा आफ्नो नाम र लिङ्ग परिवर्तन गर्न निवेदन दिएकी छन्। मस्ककी १८ वर्षीया छोरीले महिलाको रूपमा आफ्नो पहिचान कायम गर्न र नाम भिभिआन जेना विल्सन राख्न आग्रह गरेकी छन्। अहिलेको उनको नाम जेभिएर एलेक्सान्डर मस्क हो। नाम […]
हातमा यी चिन्ह हुनुलाई मानिन्छ लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुने संकेत !
June 22, 2022 N88LeaveaComment on हातमा यी चिन्ह हुनुलाई मानिन्छ लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुने संकेत !
हस्तरेखाशास्त्र अनुसार मानिसको हातमा धेरै प्रकारका चिन्ह हुन्छन्। जसरी हातको रेखाबाट भविष्य थाहा हुन्छ, त्यसैगरी हातमा रहेको निशानले पनि हाम्रो जीवनसँग जोडिएको धेरै रहस्य खुलाउँछ । कतिपय अंकलाई धेरै शुभ मानिन्छ, जसले व्यक्तिलाई अपार सफलता ल्याउँछ भने कतिपय अंकले व्यक्तिको जीवनमा समस्याबाट गुज्रिरहेको संकेत गर्छ । यहाँ तपाईलाई हातमा रहेको शुभ चिन्हको बारेमा बताउँदैछाैँ। त्रिशूलको […]
१२ राशिमध्ये यी २ राशिलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ, जान्नुहोस् कस्तो हुन्छ यी राशिका व्यक्तिहरुको स्वभाव
June 22, 2022 N88LeaveaComment on १२ राशिमध्ये यी २ राशिलाई सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छ, जान्नुहोस् कस्तो हुन्छ यी राशिका व्यक्तिहरुको स्वभाव
काठमाडाैं । ज्योतिषमा १२ राशिको बारेमा कुरा गरिएको छ। यी सबै राशि चिन्हहरूले व्यक्तिको जीवनमा फरक फरक प्रभाव पार्छ। मान्छेको स्वभाव फरक हुन्छ । उनीहरुको रुचाइ र मन नपर्ने फरक छ । तर के तपाईलाई थाहा छ यी १२ राशी मध्ये दुई राशी छन्, जसलाई निकै शक्तिशाली मानिन्छ । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर […]
June 22, 2022 N88LeaveaComment on यी २ राशिको भाग्य चम्किदै ! हट्दैछ अर्काे महिना शनिको प्रभाव !
शनिको साडेसातीको शिकार हुनाले जीवन धेरै दुःखले भरिन्छ। २ राशिका मानिसहरुलाई साउनदेखि शनिकाे प्रभावबाट राहत मिल्ने छ । यससँगै यस राशिका जातकले आफ्नो करियरमा एकपछि अर्को सफलता पाउन थाल्नेछन् । १२ जुलाई २०२२ मा शनि ग्रहले राशि परिवर्तन गर्दैछ। याे ग्रह कुम्भ राशिबाट बाहिर निस्केर प्रतिगामी भएर मकर राशिमा प्रवेश गर्नेछ । प्रतिगामी शनिको गोचरले […]